mars 2022 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady 6 Martsa 2022
« MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO »
Alahady voalohany, alahady nandraisana ny Fanasan’ny Tompo Alahady Karemy I
« Ary Jehovah nandatsaka tamin'i Sodoma sy Gomora solifara sy afo, avy tamin'i Jehovah tany an-danitra » (Genesisy 19:24)
Alahady voalohany androany, ibanjinan’ny FJKM ny lohahevitra vaovao hoe « MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO » ary ihany koa alahady voalohany amin’ny Karemy.
Ny Mpitandrina miana-draharaha, Andrianaivomanana Willy Johnson, no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitondra ny hafatra.
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika, ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia novakian’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 147:1-6.
Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 6 « Avia miondreha ».
Noho ny halehibeny sy ny fitiavany dia natolotra an’Andriamanitra ny dera, ny laza ary ny voninahitra. Nangatahina ny Fanahy Masina mba hiasa mandritra ny fanompoam-pivavahana. Nangatahina ny Tompo mba ho raisiny ny vavaka asandratra ary ihany koa mba hankasitrahany ny Firaisana latabatra Aminy.
Nalaina tao amin’ny Joela 2:12-13 : « Koa na dia ankehitriny aza, hoy Jehovah, miverena Amiko amin’ny fonareo rehetra. Ary amin’ny fifadian-kanina sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, Ary miverena amin’i Jehovah Andriamanitrareo ; fa mamindra fo sy miantra Izy, mahari-po sady be fiantrana ary manenina amin’ny loza. »
Rehefa voambara izany dia nohiraina ny FFPM 439 :1 « Mba taomy aho e ».
Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra, dia nanao vavaka fifonana ny mpitarika.
Araka ny hafatry ny Tompo dia mila miverina Aminy ny mpanompony. Noho izany dia natao ny vavaka fifonana satria tsy tanteraka izany sitrapon’Andriamanitra izany. Nangatahina ny Tompo mba hanadio ny tenan’ny tsirairay hafahany mivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra.
Rehefa vita ny vavaka fangatahana famelankeloka dia nohiraina ny FF 8 « Masoko manganohano ».
Ny Isaia 54:8 sy ny 1Jaona 1:9 no Teny nanolorana ny famelankeloka
Taorian’ny fanolorana ny Teny famelankeloka dia noventesina ny hira FFPM 543 :1-3 « Mihoby ny fanahiko ».
Ho fanambarana sy fanehoana ny finoana, dia niaraha-nanonona ny Fanekempinoana laharana voalohany.
Ramino Lalaina, mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K10, no nanatanteraka izany.« Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana » (Salamo 100:2a) no Teny nangalana ny hafatra.
Samy manana ny anjara fanompoany isika ao amin’ny sampana misy antsika tsirairay avy. Amin’ny fifaliana no tokony hanaovana izany, izay mitaky fitiavana sy fanolorantena. Mba hahazoana izany fifaliana izany dia tsara ny manao hiram-pivavahana mialoha ny hanatontosana asa fanompoana. Ny hira mantsy dia manala sorisory, manala adin-tsaina ary manohitra ny asan’ilay ratsy.
Taorian’izay dia noventesina, am-pifaliana, ny hira FFPM 430:1 « Endrika Sariaka »
Mba hahatonga izany hafatra fohy izany ho tanteraka dia narahina vavaka ny fotoanan’ny ankizy sy tanora.
Ny tonon’ny hira teo aloha no nasandratra ho vavaka ary nangatahina ny Fanahy Masina mba hitari-dalana sy hanolo-tsaina mba ho amin’ny fifaliana no hanatontosana ny asan’Andriamanitra.
Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana, no nilaza ny raharaha.
« Efa nataoko teo alohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana ; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona ianao sy ny taranakao » Isaia 30:19b.
Ireto manaraka ireto ny tsara hofantarina :
.Mitohy ny fifaninanana hira faneva ho an’ny Radio Fahazavana
.Tontosaina ao amin’ny FJKM Andavamamba ny 13 martsa 2022 amin’ny 3 ora hariva ny fanompoam-pivavahana fanokafana sy fitondrana amim-bavaka ny taom-pitaizan’ny SAMPATI.
.Tontosaina androany ny fiarahabana ireo mpianakavin’ny Fiangonana nankalaza ny tsingerinandrony tamin’ny volana febroary.
.Ny 12 martsa manomboka amin’ny 8 ora dia hanatanterahana ny fiofanana ho an’ireo tomponandraikitry ny Fiangonana.
.Herinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena ny 14 ka hatramin’ny 20 martsa.
.Ny 26 martsa amin’ny 9 ora maraina dia hanatanteraka « Conférence » mikasika ny LGBT ny Sampana Vokovokomanga.
.Nambara ny toetry ny vola nandritra ny herinandro.
.Miverina manomboka izao ny famangiana ny fianakaviana tra-manjo.
.Miverina ny famangiana an-tokantrano sy ny fito antoka.
.Araka izany dia hanaraka fiofanana ireo Mpitoriteny, Katekista sy Mpitory Filazantsara ny 12 martsa tolakandro.
.Atolotra amin’io fotoana io ihany koa ny fandaminana.
.Ny Sampana Vokovokomanga dia miverina mivarotra ranomboankazo.
Hafatra sy fanentanan’ny Mpitandrina
.Noentanina ny mpianakavin’ny finoana hitondra amim-bavaka ny fiofanan’ireo tomponandraikitra hatao ny 12 martsa 2022 eto amin’ny trano fiangonana.
Nentanina ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo manam-paniriana hanaraka ny fiofanana SETELA sy FITELA, mba hisoratra anarana.
.Noarahabaina ireo nankalaza ny tsingerinandrony ny volana febroary :
« Mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba hariako ! » Izany no Teny firariantsoa natolotra ireo mpanompon’Andriamanitra teny amin’ny alitara.
Taorian’izay dia nentina amim-bavaka izy ireo.
Nisaorana ny Tompo noho ny fiheverany ny mpanompony sy ny fitsimbinany azy ireo. Nangatahina ny Tompo mba hihazona tsy hanary ny mpanompony. Ny tombon’andro sisa dia natokana ifaliana amin’ny fanompoana an’Andriamanitra.
Maro ireo mpanompon’Andriamanitra nanatontosa raki-pisaorana sy voady masina. Tao ireo nahazo tombon’andro, nahazo fitahiana sy valim-bavaka. Nisy ihany koa ny nangataka vavaka handroso bebe kokoa amin’ny asa fanompoana, ireo nangataka vavaka ho an’ny asa fivelomana. Tao ireo nangataka vavaka hahazo fahasalamana, tao ihany koa no nisaotra noho ny fitsapana sy ny mba hitrotroana amim-bavaka ny fianakaviany.
Ny hira FFPM 476:4 « Ny eo akaikinao ry Ray » sy ny FFPM 460:1 « Ario ny tahotrao » ary « Mialoka Aminao » no nangatahan’ireo nanao Voady sy Raki-pisaorana.
Ny hira FFPM 275:1 « Raisonao ry Tompo soa » no noventesina teo am-panolorana ny rakitra.
Nohiraina ny FFPM 212:1-3 « Velona sy mahery » mialoha ny vakiteny.
Ny Loholona Rakotonirainy Jacky no nanao ny vavaka fangatahana ny Fanahy Masina, mialoha ny vakiteny, mba handraisana ny Teny hahatsapan’ny mpihaino fa tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona fa ny Teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra. Nentiny amim-bavaka ihany koa ny mpamaky ny Teny sy ny hitory ny Teny. Izy ihany no namaky ny Testamenta taloha : Genesisy 19:24-29 ary Rakotonirainy Josie no namaky ny Filazantsara sy ny Epistily : Jaona 5:24-29 ; II Petera 3:1-13
Taorian’ny vakiteny dia nohiraina ny FFPM 354:3 « Ny Mpamonjy no mitady fihavanana aminao ».
Amin’izao alahady voalohany amin’ny Karemy izao dia tsara ny mampahatsiahy fa ho an’ny FJKM dia fotoana fandinihan-tena eo anatrehan’Andriamanitra ny Karemy.
Mamaly ny faharatsiana ny Tompo. Izany dia maneho fa mitsara ny Tompo. Eo amin’ny fahavelomana dia manafay ny Tompo. Eo am-bavahoan’ny fahafatesana dia misy koa ny sivana hoe mankaiza ny fanahin’ny maty. Ny asan’ny tsirairay dia manaraka azy.
Ny fotoana hiverenan’ny Tompo no fitsarana farany. Ny fandevonana ny tananan’i Sodoma sy Gomoro dia tandindon’ny fitsarana farany.
Araka ny tatitry ny olona any Rosia dia tena mahery vaika ny baomba nokleary ary matiny hatramin’ny vitsika. Marihina fa mahery lavitra noho izany ny afo solifara. Mitandrema ary mieritrereta tsara sao hiaran’izany fandringanan’Andriamanitra izany ianao. Aza miherikerika foana sao lasa vaingan-tsira sahala amin’ny vadin’i Lota.
Misy ny manao fampianaran-diso milaza fa tsy mamaly ny mpanao ratsy Andriamanitra ary hovonjeny avokoa na ny devoly aza.
Mitandrema ary mieritrereta tsara sao hiaran’izany fandringanan’Andriamanitra izany ianao. Aza miherikerika foana sao lasa vaingan-tsira sahala amin’ny vadin’i Lota.
Misy ny manao fampianaran-diso milaza fa tsy mamaly ny mpanao ratsy Andriamanitra ary hovonjeny avokoa na ny devoly aza. Mitandrema, aza fahanana lainga ny olona. Andro farany izao tsy anganongano ny fandringanana ny ratsy fanahy fa tena ho avy. Rehefa avy izany andro izany dia ho aiza ianao ? Ho eo ankavanan’ny Tompo sahala amin’ilay jiolahy nahazo famindram-po sa ho very toy ilay tsy mino anatra ?
Fotoana fandinihan-tena izao, mibebaha mba ho voavonjy.
Misaora ny Tompo raha mandalo famaizana fa ny zanaka tiana tsy tsitsiana tsora-kazo.Mamaly soa izay tsara ataontsika ihany koa ny Tompo.
Raha mino sy mahatoky ary manao ny sitrapon’Andriamanitra isika dia manana fahefana hanome fiainana ho antsika Izy. Afaka manameloka izay mandà Azy ihany koa anefa ny Tompo.
Taorian’ny toriteny dia nanatontosa ny anjara hirany ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena : « Tia antsika ».
Nisaorana ny Tompo noho ny fampahatsiahivany ny mpanompony fa mamaly ny mpanao ratsy Izy.
Manoloana izany dia naseho tamin’Andriamanitra ny fahatahorana izany fandringanana izany. Nangatahina ny Tompo mba hitana tsy hanary ny olony fa ho mpanara-dia ny Tompo sy hifady ny ratsy izy ireo.
Nentina am-bavaka ny tompon’andraikitry ny Fiangonana, ny Filoha foibe sy ny mpiara-miasa aminy, ny Synodamparitany Antananarivo andrefana, ny Filoha Synodaly sy ny mpiara-miasa aminy.
Nentina amim-bavaka ny tsirairay mba handini-tena. Nentina amim-bavaka ny asan’ny Fiangonana. Nentina amim-bavaka ihany koa izay rehetra mahasoa tsy voatonon’ny vava. Nentina amim-bavaka ireo rafitra rehetra manao fankalazana sy ny Komity manomana ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.
Nentina amim-bavaka ireo manam-paniriana hiroso hanaraka ny fiofanana SETELA sy FITELA.
Nisaorana ny Tompo noho ny fiombonam-bavaka androany. Nangatahina ny Tompo mba hahay hifampitaona amin’ny fiombonam-bavaka ny mpianakavin’ny finoana.
Nentina amim-bavaka ny sahirana, ny tra-boina, ny marary, ny mana-manjo, ny very asa, ny tratry ny kere, ny tsy manan-kialofana, ireo manana hataka manokana. Nentina amim-bavaka ihany koa ireo rehetra nanao raki-pisaorana sy voady masina.
Nampiarahina tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.
Nohiraina ny FFPM 628:4 « Ry mpamonjy olom-bery » .
Niarahana nanonona ny Tondrozotra 2022.
Nohiraina ny Antema 5.
Nofaranana tamin’ny vavaka mangina ny fotoana ary narahina feon-javamaneno ny firavana.
Taorian’ny fanompoam-pivavahana dia nisy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.
Nohiraina ny FFPM 446 : 3 « Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko! » teo am-piomanana.
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana : FFPM 226–FFPM 482-FFPM 107.
Natao ny vavaka ary nohiraina mandritra ny fanatazana ny Raki-pisaorana sy fanangonana ny kapoaka ny FFPM 465 « Ry Jeso ô, ry Jeso ! »
Nanome hafatra fohy ny Mpitandrina ary natolotra ny Tsodrano.
Natao ny hira « Mialoka Aminao » nofaranana tamin’ny Amena nohiraina sy vavaka mangina.
Nisy ny famangiana manjo rehefa vita ny fotoana.
Nikirakira ny fafana : Rabako Tovohery
Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves sy Harentsoa Rova
Mamaly ny faharatsiana ny Tompo
Jao.6/65 : « Ary hoy Jesoa : Izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona Ahy raha tsy nomen’ny Ray azy izany”
Perikopa : 2Tan.34/29-33 ; Jao.6/60-71 ; Heb.6/13-20
Ny fisehoan’ny fisarahan-kevitra roa mazava tsara tahaka izao hita eto izao no fitrangan’ilay fampianaram-pinoana hoe « Tendry mialoha roa sosona ». Ireto no fanontaniana mipoitra avy hatrany: Fa inona no mahatonga ny olona mandray ka mahalala ny fampianaran’i Jesoa ho anjarany? Ary inona kosa no mahatonga ny olona tsy mahazo ka tafintohina rehefa mihaino izany? Ny valin’izany fanontaniana izany dia efa nambaran’ny Tompo eto amin’ny Jao.6/65 ihany.
Nomen’ny Ray azy izany
Vao avy nanao fahagagana sy famantarana tamin’ny famahanana olona tsy omby dimy arivo lahy ny Tompo, dia nampianatra ny amin’ny mofonaina. Manondro ny tenany izy amin’izany. Indro indray Izy milaza hoe, ny olona mahay manatona Azy sy mety mihaino ary mahazo izay lazainy dia:
Taomin’ny Ray izy hanatona an’i Jesoa. Mba hahita sy handre izay lazainy (and.44).
Ampianarin’ny Ray izy hahalala ny zava-miafin’ny finoana satria fanahy sy fiainana izany (and.63).
Afaka mandray ny votoatin’ny fampianarany. Fantany fa Jesoa no Ilay Masin’ Andriamanitra (and.69).
Mahagaga tokoa izany, fa na tamin’ny andron’i Josia mpanjaka aza dia efa nahatsinjovana izany hevitra izany (ny teny hoe Josia dia teny iray fianakaviana amin’ny Jesoa). Josia vao valo taona niainana dia tonga mpanjaka. Izy no namerina ny firenen’Israely nanompo an’i Jehovah. Nanana ny Fanahin’Andriamanitra niasa tao aminy izy, ka nahalala ny tokony hatao rehetra (2Tan.34/29-33). Tamin’ny faha-20 taonany no nanaovany fanadiovana an’i Joda sy Jerosalema (2Tan.34/3e). Zaza nandray fanjakana izy kanefa naharitra 31 taona ny nanjakany sady nahatafaverina an’i Joda sy Jerosalema amin’ny fanompoana an’i Jehovah Andriamanitra velona izy. Josia mpanjaka fahamarinan’ilay hoe: “Nomen’ny Ray azy izany”.
Tsy nomen’ny Ray azy ireo izany
Vao avy notenen’i Jesoa mafy ireo vahoaka nitady sy nanaraka Azy, raha vao nanontany ny faharetan’ny nahatongavan’i Jesoa (and.25-34). Fantatra araka ny fitantaran’i Jaona sy ny tenin’i Jesoa voasoratra eto fa:
Tia ny tenany mihoatra noho ny fitiavana an’Andriamanitra izy ireo. Ny kibony no andriamaniny (Fil.3/19).
Tsy mihevitra ny tena hino an’i Jesoa izyireo, fa tsy mihaino na mifantoka akory amin’ny fampianaran’ny Tompo na ny fony na ny sainy na ny fanahiny (and.41-59).
Tsy te-hiala amin’ny finoan-drazany izy ireo, hany ka sarotra taminy ny nandray ny fampianaran’i Jesoa. Tsy azony dia tezitra sy tafintohina izy ireo (and.60-64).
Ireto olona nanaraka sy nitady an’i Jesoa ireto no fahamarinan’ilay hoe: “Tsy nomen’ny Ray azy ireo izany”.
Mampieritreritra antsika ity tenin’i Jesoa sy ny filazan’i Jaona ato amin’ny Filazantsara nosoratany ity ny amin’ny tendry mialoha roa sosona. Nefa toa tokony hampiorina tsara ny finoantsika an’Andriamanitra noho ny teny fanambarany ny Tenany.
Aoka ny finoantsika hifantoka sy hitoetra tsara amin’ny fandraisana ny Tenin’Andriamanitra ohatra an’i Abrahama izay nandray ny teny fikasan’Andriamanitra. Andriamanitra tokoa dia mitazona ny teny fanekena nataony; sady manatanteraka izany amin’ny fotoana izay sitrany (Heb.6/13-20).
Raiso ho finoana lalimpaka ho anao izany ry Amparibe mba hitazonanao ny Famonjena.
SY NY TENDRY MIALOHA ROA SOSONA
Lesona VIII: Rom.8/1-13 ( Tohiny )
Famintinana fohy ny fanazavana teo aloha. Mbola ao anatin’ny fizarana I amin’ny epistily (Rom.1/18-8/39): Ny famonjena amin’ny finoana. Miditra amin’ny zafim-pizarana III farany. Ireto no nohazavaina tamin’izany: Ny toetra tonga hananan’ny mino – Porofo ny maha-an’i Kristy ny mino – Toro-marika hitoetra ao amin’ny vokatry ny fandresena.
Nisy tamintsika mpianakavin’ny finoana no nanana fanontaniana ka omena valiny izao.
Fanazavana ny teny hoe: “Ao amin’i Kristy” Rom.8/2
Milaza hevitra telo izy io farafahakeliny:
Toerana misy ;
Ny hevim-panahy fonosiny ;
Ny tombontsoa omeny.
Misy tontolo roa maneho fanjakana roa samihafa: Fanjakan’ny mazava sy ny fankajan’ny maizina – tontolo eo ambany fanapahan’ny maizina sy ny tontolon’ny mazava mandray an’i Jesoa ho Tompon’ny fiainany.
Ny olona ao amin’i Kristy dia olona afaka tao amin’ny fanjakan’ny aizina teo aloha ary efa tafiditra sy voafindra ao amin’ny fanjakan’ny mazava afaka tamin’ny fatoran’ilay maizina sy ratsy ary fahavalon’Andriamanitra teo aloha.
Amin’izany ny mino dia ifandroritan’ireo fanjakana roa ireo raha mbola eto an-tany. Ny vatana izay mbola mitondra ny nofo ota sy ny fanahy voavonjy noho ny finoana. Ny mahavelom-panantenana anefadia izao: efa misy vokatry ny fandresena iainan’io olona mino io na dia misy ady atrehiny hatrany aza.
Ny hevim-panahiny fonosiny
Misy ireto efatra ireto aroso araka ny ambaran’i Paoly apostoly ao amin’ireo epistily nosoratany.
Milaza ny asam-pamonjena nataon’Andriamanitra tao amin’i Kristy io (Rom.3/24; 2Kor.5/19; Kol.1/15-20…)
Maneho ny fananana firaisana lalina amin’i Kristy izany. Toy ny fanaovana grefy.
Vatan’i Kristy ny Fiangonana, ka sady ao amin’i Kristy izy no itoeran’i Kristy.
Manambara ny fanavaozana itambaran’ny fahamarinana sy fanamasinana izy io.
Raha fehezina izy rehetra, dia voafaokan’ny teny hoe: ny olona mandray sy mahazo ny fahasoavana avy amin’Andriamanitra no voatondro, fa ao amin’i Kristy noho ny asan’ny Fanahy Masina, ka ninoany ny asam-pamonjena nataon’Andriamanitra tao amin’i Kristy:
N.B. Efa nohazavaina tamin’ny Fampianaram-pinoana, gazety Tafa, volana Aogositra 2020 – Aprily 2021 izany; ary io azo hamintinana azy.
Ny tombontsoa omeny
Manana sata vaovao ao amin’Andriamanitra isika fa tonga zanaka voatsangan’Andriamanitra ao amin’i Kristy sady mpiara-mandova Aminy ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay.
Ny teny hoe: “Araka ny nofo” dia hita eo amin’ny Rom.8/4,5,6,7,8. Voalaza fa ny nofo mifanohitra amin’ny Fanahy eo amin’ny and.9. Ao amin’ny Gal.5/19-25, ny apostoly Paoly dia milaza ny momba ny Fanahy sy ny amin’ny nofo eo amin’ny fiainan’ny olona.
Ny tendry mialoha roa sosona
Ny lesonaVIII manontolo, dia mitarika ny saintsika hiditra sy hamantatra ny tombon-dahin’izay voatendrin’Andriamanitra ho ao amin’i Kristy. Sady sava lalana no fanazavana sahady izany no ambara eto amin’ity toko ity. Izany dia mba hahazoana mialoha ilay hevitra tena izy ao amin’ny toko manaraka.
«Fadio ny fanao ratsy rehetra»
ITesaloniana 5 : 22
Tsy mitovy ary tsy mety sahala amin’ny hira ao anatin’ny fihirana fanampiny ny hira ao anatin’ny fihiranan’ny Sampana Vokovoko Manga. Araka ny efa voalazantsika tamin’ny laharana teo aloha rehetra, dia sampana eken’ny besinimaro ny Sampana Vokovoko Manga, saingy tsy idirany fotsiny.
Nahoana ary ? Satria tsy vitsy amin’ny mpianakavin’ny finoana no mbola misotro na dia tsy isan’andro aza, mainka moa izay hoe : “hihira ny hiran’ny Sampana Vokovoko Manga no hatao mandrakariva !”
Rehefa nohavaozina anefa ny boki-kira fihirana Vokovoko Manga, edisiona taona 1981, dia ho gaga isika raha mahita fa tena sangan’asa literatiora kristiana tonga lafatra no voarakitra ao, ary Mpitandrina nanana ny lazany sy ny fanomezam-pahasoavana manokana no nanoratra ny tononkira rehetra ao anatiny.
Roa ihany sisa ny Misionera nanao tononkira tafiditra ao anatin’ny fihirana Vokovoko Manga, dia Mlle Evans sy Rev W. E Cousins fa ny sisa koa dia Mpitandrina sy Mpanakanto kristiana nanana ny maha izy azy tao anatin’ny Sampana Vokovoko Manga avokoa.
Ho lava ny tantara raha ireo hira 142 rehetra no hotantaraina, satria tena samy manana ny maha izy azy avokoa izy rehetra, nefa hosinganina manokana izay tena miavaka sy manana ny akony mivantana amin’ny fiainana kristiana, satria tena manana tanjona mazava amin’ny ady atao, fa mampirisika kosa, hisotroana ny rano madio, araka ny hira laharana faha 8 manao hoe : “Hé! Ny hasoan’ny rano eny Ankaratra” (8) nosoratan-dRAZANAKA.
Tantara an-kira milanto sady mirindra ny hira laharana faha 37, “Dada, ry Dada malala, modia” izay tena sentom-pon’ny vady aman-janaka kanto tokoa, mitrotro am-bavaka ny raim-pianakaviana voafatotry ny zava-pisotro mahamamo, ka maha fadiranovana ny ankohonana.
Ny tena mahafinaritra amin’izao fahavitan’ny fihirana taona 1981 izao, dia ny fitovian’ny feon-kira amin’ny hira iraisam-pirenena efa iainantsika ao amin’ny fihirana FFPM rahateo, ka tsy sahirana ny vahoaka kristiana amin’ny fikaloana azy. Toy izany izao ny hira VVM laharana faha 59 izay mitovy feo amin’ny hira laharana faha 611.
Ny tokonkira dia mitondra ny lohateny hoe : “He, misy manda mafy iray” izay nifandrimbonan’ny mpanoratra telo dia JBD Rakotondranisa sy Ramarolahy Jaona Nirina ary Ndretsa Rakotobe. Koa raha vakina izany ny tononkira izany dia fampaherezana tonga lafatra tokoa no ambarany. Fa hoy ny andininy voalohany :
“He misy manda mafy iray
Ka miomana mba handray
Ireo mpitana azy ao
Ka miomana fatratra
Hanafaka azy ireo”
Hitantsika araka izany, fa tsy tokonkira fandrabirabiana ny mpisotro toaka tahaka izay voarakitra tany amin’ny fihirana voalohany akory, no iainantsika ao amin’ny Sampana Vokovoko Manga ankehitriny, fa tena hira nivoatra, ary tena manaraka ny foto-pisainana miady amin-panajana sy amim-pitiavana hanafaka ny hafa tokoa Raha heverina manokana indray ny tononkiram-bavaka voarakitra ao amin’ny fihirana Vokovoko Manga laharana faha 86, izay nosoratan’Atoa Ramasitera Théodore mitondra ny lohateny hoe : “Mifona aminao, mivalo re!” sy ny laharana faha 87 mitondra ny lohateny hoe : “Ny mason’i Jehovah tsy takona aminay”, dia hotsapantsika fa vavaka fitalahoana irariana ny soa ho an’ny hafa izany.
Ary ity farany ity aza, dia tononkira norantovina avy ao amin’ny Soratra Masina avokoa dia ny ndininy faharoa avy amin’ny Eksodosy 13 : 21 sy Jeremia 16 : 17 ary ny andininy fahatelo avy ao amin’ny Isaia 6 : 3 sy Apokalpsy 7 : 11 – 12.
Fa tena ara-bakiteny ny fivoaran’ny hiram-pivavahana raha ny hira laharana faha 122 ao amin’ny fihirana Vokovoko Manga no heverina. Lasa tafiditra ao amin’ny fihirana FFPM laharana faha 355 izy ankehitriny dia ilay mitondra ny lohateny hoe : “Ry namako mahantra”
Izao no tantarany izay tsara ho fantatry ny mpianakavin’ny finoana ankehitriny: feon-kira vahiny izy io, izay noforonin’i W. H DOANE (1832 – 1915), fa nasian’Andrianaivoravelona (Rainy) tonony izay nohiraina tamin’ny fanorenana ny “Fikambanan’ny vehivavy mpifady toaka”, tao amin’ny Sekoly Gilpin (Ampandrana) tamin’ny faha 6 febroary 1893.
Ny teny ho “Toaka” no novain’ny komitin’ny fihirana taty aoriana, ka nataony hoe “OTA”, fa ny voarakitra ao anatin’ny fihirana Vokovoko Manga dia tsy mbola miova akory.
Andrianaivoravelona tenany no nitarika ny fivoriana tamin’io andro fanokafana io, ary natrehin’ny manam-pahefana fahizay. Toy izao no voarakitra ao anaty tononkira :
1- Ry namako mahantra, manaram-po izao,
Ny toaka no mandratra, sao simba ianao
Izay anao rehetra, ho lasa avokoa
Fa tsy mba misy fetra, ho levona avokoa.
2- Ny Tompo malahelo, tsy foiny ianao
Ny feo mamelovelo, mibitsika aminao
Onena anao ny fony, ka mitaraina hoe:
“ny toaka ajanony, mba ajanony re!”